आँबुखैरेनी : जात्राको शहर (फोटो फिचरसहित) | Aanbookhairenipost
मनकामना ढाँडबारीका पदम्सिहं आलेको अनुभवलाई मैले लिड बनाउन चाहे । उनले भनें जो आएन उसले वर्षभरीको रमाइलोदिन गुमायो । वास्तवमा पद्मिसंह आलेको भनाइमा कुनै नक्कलीपन र वनीवटपन थिएन् । उनले जे देखेका थिए त्यसलाई सपाट बताइदिएका थिए । सन्दर्भ हो कृष्णा जन्माष्टमी अवसरमा आँबुखैरेनी बजारमा भएको जात्राकॊ । आँबुखैरेनी बजारमा भएको जात्रा विशेषमा संस्कृतिलाई जुन रुपमा प्रदर्शन गरियो यसले स्थानीयहरुलाई अपार आनन्द दियो । वरपरका गाउँ बेंसी र फाँटबाट मानिसको अपार भीडको कारण अपरान्हदेखि आँबुखैरेनी बजारमा भव्य जात्रा भइरहेको छ । जात्राको अनुभव मोबाइलबाट सुनाउन एसएमएस गर्न ल्यापटपबाट विदेशमा रहेको साथीलाई देखाउन केही युवाहरु लागेका थिए ।
हिजो रातीदेखि परेको पानी आज बिहानसम्म पनि निरन्तर परिरहदा साँस्कृतिक कार्यक्रम विशेष र दाहोरी गीत प्रतियोगितालाई प्रभाव पु-याउँछ कि भन्नेमा सबैलाई शंका थियो । तर अपरान्ह दुई बजेपछि विस्तारै पानी रोकिन थाल्यो । यति बेलासम्म खैरेनीबजारमा मानिसहरु आउनेक्रम जारी छ । कतै पन्चे बाजा कतै टाकुटुके कतै भजन चलिरहेको छ । यतिबेला जात्राको चरमउत्कर्ष छ । बसपार्कमा दोहोरी गीत घन्किरहेको छ । साँझ ढल्दै जादा खैरेनीको माहौल तातिरहेको छ । पसलहरुमा व्यापार बढेको छ । जता हेरेपनि मानिसको भीडभाड छ । रात छिपिप्दै गएको छ । जात्रामा सहभागि हुन आएकाहरु विस्तारै घर फर्कदै छन् । बच्चाहरु र बृद्धहरु घर फर्के युवा र वयस्कहरु अझै पनि दोहोरी गीत पर्खेर बसेका छन् । भोलि शुक्रबार पनि माहौल तात्ने देखिन्छ ।
खासगरी तत्कालीन राजा राम शाहले जीवन त्याग गरेको मस्रयाङदी र दरौंदी नदी किनार जसलाई बेनी पनि भनिन्छ र राम शाहले देहत्याग गरेपछि यसलाई राम शाहघाट भनिन्छ । राम शाहले यहाँ आएर देहत्याग गरेपछि यस वरपरका संस्कृतिले जरा गाडेको हो । राम शाहले आफ्नी रानीले सँगै सती जान मन गरेकोले राजाले मेरै काखमा पवित्र मन्दिर स्थापना गरिदिन्छु भनेकोले प्रसिद्ध मनकामना मन्दिर स्थापना भएको भन्ने जनश्रुति पाइन्छ । आँबुखैरेनी वरपरको संस्कृतिको विकासमा रामशाह घाट र मनकामना मन्दिरको स्थापनालाई भुल्नु हुदैन । यसैगरी महाभारत पर्वत श्रृखंलाको अग्लो मध्येको पहाड छिम्केश्वरी मन्दिर को स्थापना र यसले विकास गरेको संस्कृतिलाई यहाँनेर भुल्नु हुदैन । तनहुँको पुरानो सदरमुकाम बन्दिपुर र यसको सेरोफेरोमा विकास र संरक्षित भएको संस्कृति आँबुखैरेनी पेरीफेरीको संस्कृतिको जरा हुन् ।
मस्रयाङदी नदीमा पुल नहुदा सुपा डुंगाबाट गोरखा र तनहुँतर्फ आवतजावत गरिन्थ्यो । यसक्रममा विभिन्न बेला र अवसरमा जात्रामात्रा र सांस्कृतिक भेला र कार्यक्रमहरु गरिन्थ्यो भन्ने स्थानीय बूढापाकाहरुको अनुभव छ । उनीहरु बालापनमा मस्रयाङदी वारी र पारी नदी किनारामा मानिस जम्मा भेला हुने रमाइलो र रस रंग गर्ने चलन रहेको बताउँछन् ।
जात्रामात्रा हुनेपछि जो कोही पनि हुरुक्कै हुन्छन् । गीत संगीत भनेका मानवीय मन छुने साधन हुन् । देशमा द्धन्द्ध हुदा जात्रामात्रा नचाहेरै लोप भएको थियो । तर अहिले देशमा अवस्था त्यस्तो नरहेकोले जात्रामात्रामा आँबुखैरेनी वरपरको अवस्था निकैनिकैनै जागेको छ । यो पक्ष सकारात्मक छ । वास्तवमा संस्कृति भनेको हाम्रो भेषभुषा रहनसहन कला संगीत हो । हामीले जे गर्छौं त्यो सबै संस्कृति हो । यसर्थ मानवका हरेक व्यवहारहरु संस्कृतिका उपजका हुन् । संस्कृति सिकिने पक्ष पनि हो । यसलाई जीवन्त बनाउनु पर्छ । पुर्खाले पुस्ताको लागि बचाएर राखेको नासो नै संस्कृति हो । युवाले यसको अध्ययन गर्न हेर्न पाउनु पर्छ जुन आजको कार्यक्रममा भरपुर रुपमा देख्न पाइयो ।
आँबुखैरेनीमा खास गरी आँबुखैरेनी संस्कृति संरक्षण मंचले तीन चार वर्ष यता कला संस्कृतिको संरक्षण संवद्र्धन र प्रचारप्रसारको लागि पहल गरिरहेको छ । स्वतस्र्फूत सहभागिता हुने गरेको छ । को पहिला हुने र पुरस्कार पाउने भन्दा पनि आफ्ना संस्कृति र परम्परालाई पस्कन मानिसहरु आतुर छन् । यसमा पुरस्कारले झनै प्रोत्साहन दिएको छ । चुड्का भजन लाखे टाकटुके जस्ता कार्यक्रम देखाउने गरिएको छ । बजारमा पन्चेबाजा खन्किएको छ । मानिसहरुको भीडभाडले बजारमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ थिएन । के बच्चा के युवायुवती र बृद्धबद्धा सबैको सहभागिता रहेको थियो । मंचले प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम राखेर विभिन्न संस्था व्यक्ति र समूहसँग सहयोग र चन्दा संकलन गरेर आँबुखैरेनी सेरोफेरोको संस्कृतिलाई उजागर गर्न संरक्षण गर्न र प्रचारप्रसारको लागि पहल गरिरहेको छ । यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । जात्रामात्रा सार्वजनिक सडकमा गर्दा सवारीआवत जावत भने प्रभावित बन्ने देखिन्छ । यसको लागि स्पेशन लोकेशन चयन गर्नुपर्छ । राजमार्गमा दौड्ने बिरामी यात्रीलाई सडकमा प्रहशन गर्ने जात्राले पुराउने प्रभावलाई भने आयोजक मनन गर्नुपर्छ ।
आजको कार्यक्रम हेर्नलाई काठमाण्डौं पोखरा गोरखा चितवन तनहुँदेखिका मानिसहरु आएका थिए । बजारले धान्नै नसक्ने मानिसको भीडले आयोजकलाई सनुतष्टि दिएको थियो भने अलस्टार युवा क्लबले दोहोरी गीत आयोजना गरेको छ । राजधानीदेखिका कलाकारहरु ल्याएर कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । राजु परियार ,चन्द्र परियार, सिर्जना विरही लगायतका कलाकार गीत गाउँन आएका छन् ।फोटो साभार : पुष्पा थापा /गोमा खनाल
One comment on “आँबुखैरेनी : जात्राको शहर (फोटो फिचरसहित)”
pyara anboo khairani basi agraj mitra haru tatha naya youwa mitra haru namaskar yahan haru ko yo kaam nikai garima maye chha jasle anboo khairani ko sanskriti lai badhawa diyeko chha . Bhabisye ma pani yestai kaam ko asha ko sath ma sampurna sanglagna mitra haruma shree krishna janmastami ko shubhakamana.
This entry was posted on August 10, 2012 by aanbookhairenipost in article/लेख/ स्तम्भ/साहित्य.